Janaraal Hayiluu Gonfaa: 'Yoo eessa tuqne Oromoo walitti buusna jedhamee, itti yaadamee kan godhamedha' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Hayiluu Gonfaa/FB
Wanti Xiinxalaa Siyaasaafi rogeessa Jawaar Mohaammad mudatee ture hiriira mormii guutummaa Oromiyaarratti akka gaggeeffamu gochuudhaan lubbuun namoota hedduu akka darbuufi qabeenyillee akka barbadaa'uuf sababa ta'eera.
Akka qondaalonni mootummmaafi namoonni hiriira irratti hirmaatan bakka gara garaarraa BBC Afaan Oromoo dubbisetti namoonni fedhii addaa qaban hiriira mormii kana keessa seenuun gara walitti bu'insa sabaafi saba, akkasumas amantaa gidduutti akka deebi'u yaalaniiru.
Dhimma kana irratti gorsaa nageenyaa Pirezidantii Itti - Aanaa Oromiyaa kan ta'an gameessi nama siyaasaafi waraanaa Birgaader Janaraal Hayiluu Gonfaa dubbisneerra.
BBC: Taateen Jawaar irratti raawwatame kun ija siyaasaafi nageenyaatiin akkamitti ilaalama?
B/Janaraal Hayiluu: Akkuma waliigalaatti yoo ilaaltu, sirnaan yoo ilaalame akka caasaa mootummaatti sirna miti. Akka safuu Oromoottis safuu Oromoo kan hin safeeffanne, sadaffaa irratti ammoo nama irratti godhamuu hin qabnerratti godhame.
BBC: Kanaaf ija siyaasaatiinis, ija nageenyaatiinis dogoggora jechuu keessanii?
B/Janaraal Hayiluu: Eyyeen. Wanti kun kaayyoo sadan akeeku of keessaa qaba jedheen yaada. Tokkoffaa, [taargeetiin] inni filatamedha.
[Taargeetiin] filatame ta'e jedhamee nama ummata biratti dhageettii qabu duwwaa osoo hin taane nama jijjiirama fiduu keessattis nama ga'ee ol-aanaa taphateefi nama mul'ata qabudha.
Kana ta'e jedhamee, itti yaaduun raawwatame.
Lammaffaa ammoo yoo eessa tuqne Oromoo dallansiisuu dandeenya, Oromoofi Oromoo walitti buusuu dandeenya jedhamee Itti yaadamee kan godhamedha.
Sadaffaan ammoo jijjiirama biyya keessatti Qeerroofi ummataan dhufe kana gatii dhabsiisuudhaan gara ofiif yaadanitti jallisuuf kan yaalamedha.
Walumaa galatti wantoota sadan kana akeeka.
Deemee deemee galmi isaa Oromoofi Oromoo walitti buusuu, Oromiyaa dirree jeequmsaa gochuu, bakka du'aatiifi bakka wanti tokkollee keessatti hin hojjetamne gochuufidha.
Kanaan duras, Oromootiin Oromoo cabsan. Oromoon yoo walitti deebiye amantaadhaan, gosaan akkasumas wal qoqqooduu jaarmiyaalee siyaasaatiin jedhanii waan yaadaniif galiin isaa isa kanadha ija siyaasaatiin yoo ilaaltu.
Ija [miliitariitiin] yeroo ilaaltu ammoo salphaadhumatti jeequmsa kaasuudhaaf namatti kan toludha. Wantichi bakka ati yeroo fudhattee itti hin yaadne kan si godhudha. Kanaaf, humni nageenyaa kan dhuunfaas haa ta'u walitti bu'u ta'a.
Kanaatiif wanti kun shallagamee kan taasifamedha jedheen yaada ani karaakootiin.
BBC: Ajajni gubbaatii hanga gadiitti darbeera kan jedhutu dhaga'ame. Kanaaf, wanti kun gubbaatii ajajame jechuuf nama hin dandeessisuu?
'Masaraa mootummaa keessatti Oromoo arrabsuun, abaaruun ummata dallansiiseera'
B/Janaraal Hayiluu: Sirna militarii keessatti hogganaa [laayerii] gara garaa qabutu jira. Dirqamaafi itti-gaafatamummaa gara garaa qabu.
Mootummaa kana keessatti rifoormiitu godhame malee, jijjiiramni hundeedhaa hin godhamne.
Kanaaf, birokiraasii kana keessa jijjiirama kana kan mormanitu keessa jira. Jijjiirama kana kan ija diimeffatee ilaalutu keessa jira.
Kanaaf, isa kana [saabotaaj] gochuudhaaf karaa mootummaatiin mootummaa fakkaatanii ajajuun wanta jirudha.
Kanaafis akkan hubadhetti, Pirizedaantiin keenyaa kaleessa (dheengadda) akka ibsa kennettis, Komishiniin Poolisii Oromiyaa akka kennettis, akkasuma keessa keessaan ammoo fakkeenyaaf Itti-aanaan Komishinii Poolisii Federaalaa akkaataa hubachiiseen quba qabinsi hin jiru jechuudha.
Kanaaf, kun hundumtuu quba osoo hin qabaatiin ['soft target'] filatee wanta kana ajajee jira. Kun ammoo [record] ta'ee jira.
Wanti kun garuu [caaseffameera] ajaja gubbaatii dhufedha jechuudhaaf yeroo nama gaafata. Qoratanii sirnaan ilaaluu nama gaafata.
Qabatamaan waan mul'ateen garuu wal harkaa kan hin qabne ta'uu isaati kanan hubadhu. Mootummaa Oromiyaa jechuun qaama guddaadha. Isaaniin hin mariyanne, isaaniin hin hubanne.
Federaala keessas qaamonni dhimma kana ilaalan ni jiru. Isaaniin hin ilaalchifne. Bifa hattummaan waan dhufe fakkaata ani yeroon ilaalu. [Ye wisx arbanyaa isa jedhan].
BBC: Amma haalli deemaa jiru kana waliin walqabatee Oromiyaadhaaf sodaachisaadha ykn sodaachisaadha jettanii amantuu?
B/Janaraal Hayiluu: Kan barbaadames isa kana. Warri kanarratti xiyyeeffatanii ka'an kana kan filatan, nageenya Oromiyaa keessatti akka salphaatti booressuu kan jedhudha.
Wanti kun osoo ta'ee turee ykn wanti hamtuun tokko osoo dhalatee dubbiin kana caalaa deema. Ammas wanti isaan godhan maal innii, jarri kun waan tokko milkeeffataniiru.
Wanta milkeeffatan keessaa guyyaa tokko haa ta'u guyyaa lama jeequmsi Oromiyaa keessatti akka ka'u godhaniiru.
Lubbuun ilmaan Oromoo akka badu ta'ee jira. Baayyee nama gaddisiisa. Wanta ta'uu hin malledha.
Wanti kun seeraafi sirnaan gara fuula duraatti qoratamee ummataaf ifa yoo ta'uu baate, gara fuula duraatti humna inni gara fuula duraatti rakkoo uumuu malu salphaa miti.
Isa kaleessa ta'erraa anaan kan na yaaddessuufi naannoo Oromiyaa, ummata Oromoofis, biyya kanaafis rakkoo kan ta'u mootummaan birokiraasii isaa gadi taa'ee sirriitti ilaaluutu irra jiraata.
Isadha biyyaaf rakkoo kan ta'u. Caasaa mootummaa keessa mamii tokko malee qulqulleessun yeroon isaa ammadha. Tarkaanfiin kun mootummaaf carraa ni kenna jedheen ilaala.
Akka Oromoottis aggaammii bifa amma ittiin tuqanii nu ilaalan kana teenyee sirriitti ilaaluun nurra jira.
Beekaa qabna, jaarsa qabna waan ta'eef teenyee qorannee yeroo maal nu godhan nuti ammoo maal gochuu qabna kan jedhu osoo dirree keenya irratti jeequmsa hin uumiin dirree warra nuuf ergeetti deebisuun nurra jiraata.
BBC: Magaalota Oromiyaa hiriira keessatti bahame kana qabiinsi isaa akkam ta'uu qaba jettu?
B/Janaraal Hayiluu: Ajajni kenname Poolisiin Oromiyaa aantummaa ummataan akka hojjetudha. Baay'ina keessa ammoo kan yakka hojjetan hin dhiban.
Akuman jedhe caasaan mootummaa guutummaan guutuutti qulqulluu miti. Kanarraan kan ka'e haala hin malleen lubbuun darbee jira. Kun sirrii miti waan ta'eef, qoratamee ummataaf ifa ta'uuti irra jiraata.
Lamaffaa ammoo, ummata aarii keessa galee miira isaa ibsachaa jiru keessa galanii eenyummaan isaanii kan hin beekamne dhukaasa kan bananitu jiru.
Hidhatanii ummata keessa seenanii dhukaasanii kan ummata ajjeesanitu ture. Kan poolisii Oromiyaarratti dhukaasee ajjeesellee tureera.
Fakkeenyaaf yoo fudhanne, Amboo keessatti ummata keessa taa'anii gara poolisiitti kan dhukaasanitu ture.
Poolisiin Oromiyaa deebii yeroo kenne kan miidhame ummata keenyadha jechudha. Adaamaa keessattis kan ta'e mana keessa taa'anii ummatatti dhukaasuudha. Naannoo Hararittis kan ta'e isuma kana.
BBC: Taateen kun siyaasa Oromoo keessatti gara fuula duraatti maal akeeka?
B/Janaraal Hayiluu: Wanti ta'e kun jabina diina keenyarraa kan ka'een miti. Dadhabiinsa nuti akka Oromootti qabnurraa kan ka'edha.
Yeroo barbaachisutti tokkummaa cimsannee, kan irratti tokko ta'uun nurra jiraaturratti tokko taanee hojjechuu dhabuudha. Akkasumas, nama keenya isa karaarraa goreefi jal'aa ta'e gorsinee deebisuu dadhabuudha.
B/Janaraal Hayiluu: Galatoomaa isinillee.